चैत्र ५ गते अनेकोट हत्याकाण्ड : ‘संदिग्ध आतङ्ककारी’ हरूको सम्झनामा - Jhilko
चैत्र ५ गते अनेकोट हत्याकाण्ड : ‘संदिग्ध आतङ्ककारी’ हरूको सम्झनामा
०५५ पुसमा जनादेशमा गरिएको गिरफ्तारी र लुटपाटपछि पत्रिका अद्र्धभूमिगत रूपमा प्रकाशन गरिरहेका थियौं । २० वर्ष अगाडि आजकै दिन, चैत्र ५ गते साँझ भोटेबहाल गल्लीको पुरानो घरको तेस्रो तल्लामा महान् शहीद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’, पत्रकार महेश्वर दाहाल, शारदा अधिकारी र म सँगै थियौं । सेन, महेश्वर र म अद्र्धभूमिगत रूपमा जनादेश पत्रिकाका लागि काम गरिरहेका थियौं । शारदा अधिकारीले हामीलाई व्यवस्थापनमा सघाएका थिए ।
समय ठ्याक्कै ख्याल छैन । साँझको खाना खाने समयमा अनेकोट घटनाबारे रेडियोबाट सुनियो । सत्यतथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका थियौं । हामीसँग ल्याण्डलाइन टेलिफोन थिएन र अहिलेजस्तो मोवाइलको सुविधा पनि त्यतिबेला थिएन । घटनाबारे वास्तविक तथ्य थाहा नभए पनि केही गडबड भएकोमा शङ्का थिएन । स्वभावैले संवेदनशील कृष्ण सेन यो घटना सुनेपछि रोइरहनु भएको थियो । महेश्वर र म पनि आँशु लुकाउन सक्ने अवस्थामा थिएनौं ।
‘दोहोरो भिडन्त’ का नाममा प्रचार गरिने यस्ता कुख्यात हत्याकाण्डहरू पलपल सुन्नु हाम्रो बानी र विवशता बनिसकेको थियो । यस्ता काण्डहरू सुन्दासुन्दा हाम्रो संवेदनाचेत पनि ढुङ्गाजस्तो बन्दै गइरहेको थियो । कति मात्रै रुनु ?आँशु रित्तिंदै गएको थियो । पौने नौ बजेको बीबीसीले पनि अनेकोट काण्डबारे उल्लेख ग¥यो । त्यस दिन हामीमध्ये कोही पनि निदाउन सकेनौं । घटनामा हत्या गरिएकी निर्मला देवकोटा शारदा अधिकारीका निकट आफन्त थिइन् । पारिवारिक घटना भएकाले शारदा त्यहाँबाट हिंडिहाले ।
घटनाबारे स्पष्ट हुँदै गयो– गिरफ्तार गरेर मुठभेडको नाममा हत्या गर्दै आएको सत्ताले अनेकोटमा नयाँ प्रयोग गरेको थियो । त्यहाँ घरभित्रै रहेका कलाकारलाई बाहिरबाट आगो लगाएर नाजीशैलीको प्रयोग गरिएको थियो । अनेकोटका वीर–वीराङ्गनाहरूले पनि प्रतिरोधको नयाँ रेकर्ड राखे । आगोको लप्का र धुवाँको मुश्लोबीच आत्मसमर्पणका लागि गरिएको आदेशलाई उनीहरूले अस्वीकार गरे । आगोको लप्कोले लपेटिरहेको ज्यान, धुवाँको मुश्लोले सासै फेर्न पारेको कठिन अवस्थालाई पनि उनीहरूले पर्वाह गरेनन् । ‘बाँच्नका लागि आत्मसमर्पण गर’ भन्ने सत्ताको आदेशलाई उनीहरूले चुनौती दिए । त्यतिबेलाको पार्टी स्कुलिङ अनुसार भौतिक जीवनभन्दा विचार, आस्था र निष्ठाको महत्वलाई उनीहरूले पुष्टि गरे ।
जनयुद्धसँग वैचारिक सहमति राखेकै कारण ०५५ चैत्र ५ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको अनेकोटमा ७ जना कलाकारको हत्या भएको आज २० वर्ष पूरा भएको छ । अनेकोटमा घरभित्रै बसिरहेको अवस्थामा हत्या गरिएका कलाकारको अपराध भनेको जनमुक्तिको गीत गाउनु थियो । उनीहरूले गाउने जनमुक्तिको भाकालाई सत्ताले ‘आतङ्ककारी’ नारा ठान्यो र उनीहरूको भाखामा साथ दिने गिटार, बाँसुरी, मादल, हार्मोनियमलाई सत्ताले विध्वंशक ‘बन्दुक’ देख्यो । उनीहरूले गाउने जनताको भाकाबाट आतङ्कित सत्ताले कलाकारहरूलाई आतङ्ककारी देख्नु अनौठो थिएन ।
कलाकार मात्र होइन, मेलापात गएका कयौं सर्वसाधारणलाई सत्ताले आतङ्ककारी देखेको थियो र मेलापातमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने कुटोकोदालो, हँसिया, नाम्लो– जेसुकैलाई पनि खतरनाक हतियार ठानेर हत्या र आतङ्कको शृङ्खला थोपरिहेको थियो । जनयुद्धसिर्जित जनचेतनाबाट त्रस्त सत्ताले दिनहुँ मात्र होइन, क्षण–क्षण ‘दोहोरो भिडन्त’ का नाममा कयौं हत्याकाण्डहरू मच्चाइरहेको थियो ।
अनेकोट त्यही शृङ्खलाको एउटा पाटो थियो । आतङ्कित स्थानीय जनविरोधी तत्वको उक्साहटमा जनकलाकारहरूको हत्या योजना बुनिएको उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीयको भेषमा रहेका सुराकीहरूको सहयोगमा सत्ताले देशैभरि यस्ता हत्याकाण्डहरू मच्चाउँदै आए पनि जनताको गीत गाउने कलाकारहरूको सामूहिक हत्या पहिलो पटक भएको थियो । कलाकारहरू च्याङ्वा लामा, निर्मला देवकोटा, सुभद्रा सापकोटा, चिनीमाया लामा, गुम्बासिंह तामाङ, डम्बर श्रेष्ठ र मञ्जु कुँवर बसेको घरमा आगो झोसियो र चारैतर्फबाट घेरा हाली अन्धाधुन्ध ‘फायर’ गरियो ।
चौतर्फी आतङ्क खडा गरेर कलाकारहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिइयो । तर उनीहरूले जीवनको भीख मागेनन् र स्वीकार गरेनन् आत्मसमर्पणको आदेश । बरु, आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म बन्दुकविरुद्ध आवाजले प्रतिरोध गरिरहे । इँटा, ढुङ्गा, भाटाले प्रतिरोध गरिरहे । मृत्यु स्वीकारे तर आस्था र निष्ठामा कुनै खोट हुन दिएनन् । त्यसैले त उनीहरू महान् भए ।
जनयुद्धमा लागेकाहरूको सपना एउटै थियो– सुरन्दर संसार रचना गर्ने । उद्देश्य एउटै थियो– सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने । सपथ एउटै थियो– मृत्यु या मुक्ति । अनेकोटकाण्डको बीस बर्षपछि देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । राजतन्त्रको ठाउँ गणतन्त्रले लियो । राजनीतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनजीवन र जनसरोकारका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
एउटै सपना र उद्देश्य बोकेका र एउटै सपथ खाएका योद्धाहरू कयौं शहीद भए, कयौं बेपत्ता भए, कयौं घाइते–अपाङ्ग छन् । ‘सकुशल’ बाँचेकाहरूमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । अझ कतिपयमा आएको वर्गोत्थानले हिजो सँगै खाएको सपथ, एउटै उद्देश्य र सपनाको धज्जी उडाएको छ । भौतिक सुविधालाई नै जीवनको सबैथोक ठान्ने एउटा ‘ठालु’ वर्ग जनयुद्धकै जगमा खडा भएको आरोप छ । अनेकोटजस्तै कयौं बलिदानको जगमा निर्माण भएको नेतृत्व वैचारिक रूपमा स्खलित, व्यक्तिगत, पारिवारिक स्वार्थका लागि ¥याल काढ्ने, पद–प्रतिष्ठा र भौतिक सुविधा प्राप्तिका लागि जेसुकै गरिरहेका समाचार सुन्नु अहिले हाम्रो बाध्यता बनेको छ ।
घटना घटेको २० वर्ष पूरा भए पनि अनेकोटकाण्डको स्मरण ताजै छ । अनेकोट काण्डलाई साँस्कृतिक प्रतिरोध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय तत्कालीन माओवादीले ग¥यो । बृहत् शान्तिसम्झौतापछि कर्मकाण्डी रूपमा मनाइँदै आएको त्यो दिवस पनि पछिल्लो समय हराउन थालेको छ । जसको बलिदानीले गणतन्त्र आयो, उनीहरूलाई नै भुल्ने हामीले कस्तो सँस्कृति निर्माण गरिरहेका छौं ?
राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि साँस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेन । बरु त्यो अझ भद्दा रूपमा प्रस्तुत भएको प्रतित हुन्छ । विचार, आस्था र निष्ठाका लागि अनेकोट काण्डका शहीदहरूले देखाएको बलिदानको गाथालाई कायम राख्न नसके पनि गिज्याउने काम नगरे शहीदहरूको ‘आत्मा’ले शान्ति पाउँथ्यो कि ? अनेकोटका ‘संदिग्ध आतङककारी’हरूलाई सलाम ! समयबद्ध साप्ताहिकबाट
भारतीय प्रधानमन्त्रीले ट्विटरमा नाम बदलेसँग भाजपाका नेताको अभियान
धुलीखेलमा एक सुत्केरीको मृत्यु, उनको पीसीआर परीक्षण, रिपोर्ट...
धुलिखेल अस्पतालमा अहिले थप सतर्कता अपनाइएको हाम्रा काभ्रेस्थित सम्वाददाताले जनाएका...
सरकारले बढी आय हुने क्षेत्रबाट बढी राजश्व उठाउने
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ७८औँ भन्सार दिवसका अवसरमा राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न...
मिडियाः म्यासेज कि मसाज ?
पत्रकारिताको साख यसरी खस्किएको छ कि यो मसाज गर्ने पत्ती जस्तो छ । नयाँ मिडियामार्फत...